स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, बचाउन सकिने तीन वटा ज्यान गइसक्यो - लण्डन काठमाडौँ
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, बचाउन सकिने तीन वटा ज्यान गइसक्यो
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, ठाउँठाउँ कोरोनाभाइरस हस्पिटल भन्दै पूर्वाधार नभएको भवनमा बेड र बोर्ड राख्ने काम बन्द गर्नु जरूरी देखियो । बचाउन सकिने तीन वटा ज्यान गइसक्यो । सास फेर्न नसकेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने सिकिस्त बिरामीलाई धागो कारखानाको पुरानो बिल्डिङमा सुताइदिएपछि मृत्युलाई रोक्न सकिन्नथ्यो नै । यसरी उपचार नै नपाएर मान्छे मर्ने अवस्थाले तपाईंलाई पनि उत्तिकै दुःख लागेको होला ।
धनगढ़ीमा भर्ना भएका बिरामीले तातो पानी पिउन पनि पाएका छैनन् । न कसैले परीक्षण गर्छ, न दबाइ दिन कोही आउँछ । यसरी त हस्पिटल र आइसोलेशनको नाममा बिरामी कोठामा थुनिएर मर्ने भयो । भरतपुरमा बनेको कोरोनाभाइरस हस्पिटलमा भाइरस नै नभएका बिरामीले सही उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । निगेटिभ आयो भन्यौं, खुशी भयौं । चार दिनपछि बल्ल रिजल्ट आउँछ, आफन्तले के गर्ने ? मर्दै गरेको बिरामीलाई पानी दिने कि नदिने ? शव बुझ्ने कि नबुझ्ने ? क्वारेन्टीनमा बसेका मुटुका बिरामीको पोखरामा मृत्यु भयो ।